Iindaba - iBelt kunye neNdlela
Inyathelo leBelt kunye neNdlela lingenise ixesha elitsha lomanyano lwezoqoqosho. Ingxelo ye-19 kaZwelonke yeNkongolo yeQela lamaKomanisi lase China yaveza ukuba kuyafuneka ukuba kugxilwe kulwakhiwo lweBelt kunye neNdlela, inyanzelisa ekungeneni nasekuphumeni, kwaye ilandele umgaqo wokubonisana ngokudibeneyo, ulwakhiwo ngokudibeneyo kunye nokudibana uphuhliso.
Iphulo le "One Belt, One Road" lakhokelela kwixesha elitsha lomanyano lwezoqoqosho.
Ingxelo ye-19 yeSizwe yeCongress of the Communist Party of China ibonise ukuba kuyimfuneko ukugxila kulwakhiwo lwe "Belt kunye neNdlela", ngokuhambelana nomgaqo wokwazisa nokuphuma, ulandele umgaqo wokubonisana ngokubanzi, ngokudibeneyo ulwakhiwo nokwabelana, ukomeleza amandla okuyila, intsebenziswano evulekileyo, kunye nokuqhagamshela umhlaba nolwandle unxibelelwano lwangaphakathi nolwangaphandle, kunye nokuncedisana ngeendlela ezimbini phakathi kwempuma nentshona. Umzekelo ovulekileyo.
Njengomnye woovulindlela bamashishini amaTshayina "aphumayo", u-Yueqing Junwei Electric Co, Ltd. (apha ekuthiwa ngu-Junwei Electric) ubambelele kwizinto ezintsha, ezilungelelanisiweyo, eziluhlaza, ezivulekileyo nezabelwana phantsi kwemvelaphi yokukhawulezisa ukukhawulezisa ilizwe. yephulo "leBelt kunye neNdlela". Umxholo wophuhliso, bamba ithuba lokwakhiwa kweXinjiang yommandla osisiseko weSilk Road Economic Belt, kwaye uhlala uvula indawo entsha yophuhliso.
Ukusuka eMelika, kumbindi weAsia ukuya eAfrika, ukusuka ekuthumeleni iimveliso ezizimeleyo zodwa ukuya kwisivumelwano ngokubanzi seeprojekthi, ukusuka "ekuxhobiseni iChina" ukuya "ekuxhobiseni umhlaba", uJunwei Electric uqhubela phambili kwi "Belt and Road", ebonisa umhlaba umtsalane wendalo yase China.
Ukuphendula kwiphulo "Elinye iBhanti enye yeNdlela"
Kudala ngaphambi kokuba kukhutshwe inyathelo le "One Belt One Road", uJunwei Electric wayeqalisile ukuphonononga iimarike zangaphandle.
Ngaphezulu kweminyaka elishumi eyadlulayo, uJunwei wajonga kwimarike yamanye amazwe. Ngemizamo engagungqiyo, iimveliso ezizimeleyo zikaJunwei zithunyelwe kumazwe ahlukeneyo e-Afrika, kuvulwa isigaba esitsha sokuba le nkampani "ihambe kwihlabathi liphela" kwaye ifumanise ukuqala okuhle kweemveliso kunye neenkonzo eziphezulu zokunceda ilizwe.